(၁၀) နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို သတိရနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ | CeleTrend
သီချင်းအေးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုရရှိထားတဲ့အဆိုတော်တွေထဲမှာတော့ဖြိုးပြည့်စုံလည်း အပါအဝင်ပါ။ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ မကြာသေးခင်ကပဲ “အိမ်မက်တွေနောက်လိုက်နေတယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ မိဘနဲ့ဆရာသမားကို မမေ့တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ “၁၀ နှစ်ပြည့် သတိတရ လွမ်းဆွတ်ခြင်း…စာစကားတွေ အများကြီး မရေးတော့ပါဘူး..အမေ သံသရာလွတ်ကြောင်း အထောက်ပံ့ကောင်းတွေ ကောင်းစွာရှာဖွေနိုင်ပါစေ…သားလည်း ကြိုးစားနေပါတယ်…(P.S. နက်ဖြန်ဆို ဆရာကေအေတီ ဆုံးတာ ၇နှစ်ပြည့်)”ဆိုပြီးတော့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ပုံလေးနဲ့အတူ ရေးသားထားတာပါ။
(၂၀၁၀)ခုနှစ်က Melody World ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီနေ့မှာနာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါပြီ။သူကတော့ အောင်မြင်မှုများစွာမရရှိခင် လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်ကဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်း မမေ့မလျာ့ဘဲ လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေဆဲပါပဲနော်…
Source : PhyoPyaeSone
သီခငျြးအေးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျကွိုကျနှဈသကျမှုကိုရရှိထားတဲ့အဆိုတျောတှထေဲမှာတော့ဖွိုးပွညျ့စုံလညျး အပါအဝငျပါ။ ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့ မကွာသေးခငျကပဲ “အိမျမကျတှနေောကျလိုကျနတေယျ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးသဈထှကျရှိထားတာဖွဈပွီး ပရိသတျကွိုကျနှဈသကျနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့ မိဘနဲ့ဆရာသမားကို မမတေ့တျတဲ့လူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ “၁၀ နှဈပွညျ့ သတိတရ လှမျးဆှတျခွငျး…စာစကားတှေ အမြားကွီး မရေးတော့ပါဘူး..အမေ သံသရာလှတျကွောငျး အထောကျပံ့ကောငျးတှေ ကောငျးစှာရှာဖှနေိုငျပါစေ…သားလညျး ကွိုးစားနပေါတယျ…(P.S. နကျဖွနျဆို ဆရာကအေတေီ ဆုံးတာ ၇နှဈပွညျ့)”ဆိုပွီးတော့ မိခငျဖွဈသူရဲ့ပုံလေးနဲ့အတူ ရေးသားထားတာပါ။
(၂၀၁၀)ခုနှဈက Melody World ပွိုငျပှဲမှာ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့ ဒီနမှေ့ာနာမညျကွီးအဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနပေါပွီ။သူကတော့ အောငျမွငျမှုမြားစှာမရရှိခငျ လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈကဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့ မိခငျဖွဈသူကိုလညျး မမမေ့လြာ့ဘဲ လှမျးဆှတျတမျးတနဆေဲပါပဲနျော…